Guddoomiye Dhoobo "Taladii Puntland waxaa la wareegay koox gaar ah" – Bandhiga
Guddoomiye Dhoobo "Taladii Puntland waxaa la wareegay koox gaar ah"
Guddoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhoobo oo 7-dii bishani November ay xildhibaannada Puntland xilka ka qaadeen ayaa markii ugu horreeysay ka hadlay tallaabadaasi xilka lagaga xayuubiyay.
Shir jaraa’id oo ku qabtay degmada Xingalool ee fgobolka Sanaag oo maalmahani uu ku sugan yahay ayuu kaga hadlay arrimo ayy kamid yihiin xil ka qaadistiisa, xaaladda cakiran ee Garoowe, weerarkii xarunta baarlamaanka iyo tan siyaasadeed ee Puntland.
Guddoomiye Cabdixakiim wuxuu sheegay in wixii ka dhacay Garoowe oo dad ay ku dhinteen uu aad uga xun yahay islamarkaana uu soo jeedinayo in arrintaasi dib loogu laabto.
Shirar uu sheegay in lagaga hadli doono goboladda Sool iyo Sanaag in ay qaban doonaan, kuwaasoo xuquuqdooda ay ku maqan tahay Puntland sida uu hadalka u dhigay.
Wuxuu sheegay inuu weli yahay guddoomiyaha xaqa ah ee Baarlamaanka Puntland.
Dhoobo, ayaa si cad u sheegay in Puntland ay ku socoto burbur, islamarkaana ay gacanta u gashay koox gaar.
Guddoomiyaha ayaa hadalkiisan uu ku soo aadaya iyadoo todobaadkii tegay ay gollaha wakiillada cod gacan taag ahaa xilkii kaga qaadeen kaddib eedeymo la xiriira in uu ku tuntay dastuurka oo ay soo jeediyeen.